National Power News:: अनसन फेरि सुरु गर्दै डा . केसी National Power News:: अनसन फेरि सुरु गर्दै डा . केसी
१९ असोज, काठमाडौं – दशैंमा स्थगित भएको डा. गोविन्द केसीको आमरण अनसन आजबाट फेरि सुरु हुने भएको छ ।
अपराह्न ४ बजेबाट अनसन सुरु गर्ने उनले बताएका छन् । संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई तोडमोड गरेर पास गर्न खोजिएको भन्दै डा. केसीले असोज ९ गतेदेखि आमरण अनसन थालेका थिए । तर, दुई दिनपछि दशैंभरका लागि भन्दै उनले फूलपातीका दिन अनसन स्थगित गरे ।
त्यसबेला नै उनले स्थगित आमरण अनसन १९ गतेबाट सुरु गर्ने बताएका थिए । त्यस अनुसार उनी अनसन बस्न लागेका हुन् । यो बीचमा सरकारसँग कुनै सम्वाद नभएको भन्दै डा. केसीले भने, ‘आजबाट अनसन सुरु गर्दैछु ।’चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै केसी १२ पटकसम्म अनसन बसिसकेका छन् ।